Ampidino IObit Uninstaller ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (24.00 MB)
Ampidino IObit Uninstaller,
IObit Uninstaller dia uninstaller izay azonao ampiasaina raha tsy mila kaody lisansa. Izy io dia anisanireo fitaovana maimaim-poana izay azonny mpampiasa Windows PC ampiasaina hanatanterahana ny fikolokoloana solosaina sy ny fanalana ny programa ho mora kokoa sy haingana kokoa. Windows 10 dia ampiasaina mba hanafoanana ny fihenan-tsasatra sy ny olana ateraky ny fanangonana programa sy data tsy ilaina ao aminny solosainao.
Sintomy ny IObit Uninstaller
Satria rehefa mampiasa ilay programa ianao dia azo atao ny manaisotra ny programa rehetra izay tsy tafiditra ao aminny menio Add / Delete Programs anny Windows na tsy azo esorina avy eo. Ho fanampinizany, azonao atao ny manala ireo rindranasa Windows 8, 8.1, 10 efa napetraka mialoha ao aminny solosainao.
Aminny fampiasana PC maharitra, ny sisa aminireo programa sy rindranasa anarivony dia miangona ao aminny rejisitry ny solosaina. Na dia esorina aminny rafitra aza ny programa dia mijanona eo ireo residues ireo, ary ny IObit Uninstaller dia tsy manana olana aminny fikendrena ireo residues ireo ihany koa, manampy aminny fiarovana ny rezistra ny solosaina aminireo fidirana tsy ilaina.
Raha misy olana mitranga eo aminny solo-sainanao mandritra ny fanesorana programa na fanadiovana ny rezistra, ny programa, izay ahafahanao mamorona teboka fanarenana rafitra ho sitrana aminireo olana ireo, dia miasa mafy ka tsy mila anio asa io ianao
Indraindray ny fanavaozana ny Windows dia miteraka olana, indrindra aminny solosaina taloha, ka mety te hanala ireo fanavaozana ireo ny mpampiasa. Azonao atao ihany koa ny manala ireo fanavaozam-baovao izay miteraka olana eo aminny PC-nao aminny alàlanny fampiasana ny famafana famafana Windows Update anny IObit Uninstaller.
Azonao atao koa ny mampiasa ny programa mba hanesorana ireo add-on manimba izay manimba ny tranokalanao ary tsy azo esorina. Anisanireo add-ons ireo, azo atao ny mihaona toe-javatra maro samihafa, manomboka aminny add-ons izay manova ny pejy fandraisam-bahiny ka hatrany aminireo manova ny milina fikarohana na manandrana mangalatra ny mombamomba anao, noho izany dia mila manadio azy aminny rafitrao ianao satria haingana araka izay azo atao.
Inona no vaovao miaraka aminny kinova farany anny IObit Uninstaller;
Fametrahana / Fanaraha-maso fametrahana: Nihatsara ny firaketana ny fizotranny fametrahana toa ny serivisy vaovao, ny fandidiana voalahatra, ny fisie DDL.
Fahasalamanny lozisialy: Nanatsara ny fanesorana ireo ambin-drakitra fandaharana sy plug-in mampidi-doza.
Esory ny Algorithm: fanekena marina kokoa ho anny programa tsy dia ampiasaina loatra sy programa amboara
Esory ireo programa tsy azo esorina: esory ireo rindrambaiko maditra toy ny MPC-HC, IntelliJ IDEA, Rockstar Games.
Ny zava-misy fa misy maimaim-poana izy io ary miaraka aminny interface mora ampiasaina dia mahatonga azy io ho fitaovana sarobidy tokoa eo aminireo mpanala. Raha hitanao fa tsy mandaitra ny programa uninstall mahazatra anny Windows ary mitady vahaolana mahery vaika kokoa ianao, dia tokony ho anisanireo rindranasa fikolokoloana rafitra tokony hanananao aminny solosainao.
Haben'ny rakitra: 24.00 MB
Fanavaozana farany: 06-07-2021